आजदेखि जोन्सन एन्ड जोन्सन र भेरोसेल खोप लगाइँदै, क-कसले पाउँछ ? (सूचीसहित) « News24 : Premium News Channel
आजदेखि जोन्सन एन्ड जोन्सन र भेरोसेल खोप लगाइँदै, क-कसले पाउँछ ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप अभियान पुनः आजदेखि सञ्चालन हुँदैछ । खोप अभियान अन्तर्गत आज (मंगलवार)देखि प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाइने भएको हो ।
चीन र अमेरिकाबाट प्राप्त कोरोनाविरुद्धको खोप प्राथमिकताका आधारमा सार्वजनिक यातायातका चालक/सहचालक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र विदेशी शरणार्थीसहित ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउन शुरू गर्न लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
५५ देखि ६० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई चिनियाँ ‘भेरोसेल’ खोप लगाइने भएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताउनुभयाे । यस्तै खोप लगाउन छुटेका ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूह र विश्वविद्यालयका प्रध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक/सहचालकलाई पनि यो खोप लगाउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राथमिकतामा परेर पनि पहिले लगाउन बाँकी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारले समेत तोकिएका केन्द्रमा पुगेर खोप लगाउन सकिनेछ ।
सोमवार अमेरिकाबाट प्राप्त जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप ५० देखि ५५ उमेर समूहबाहेक पूर्ण र अति अशक्त/शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति, नेपालमा बसोवास गरिरहेका विदेशी शरणार्थी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीलाई लगाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार खोप यसअघि तोकिएका केन्द्रबाटै लगाउन लागिएको छ । यसका लागि सरकारबाट जारी भएको उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्नेछ । सरकारले चीनसँग ४० लाख डोज खोप खरीद गरेकोमा शुक्रवार पहिलो चरणमा ८ लाख डोज भेरोसेल र सोमवार कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत १५ लाख ३४ हजार ८५० जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप नेपाल आइपुगेको हो ।
‘हाम्रो उद्देश्य साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित नै हो’
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले भारतविरुद्ध नेपालले बलियो चुनौती पेस
मुलुकभर थप २७२ जनामा कोरोना पुष्टि, ७७७ डिस्चार्ज
काठमाडौं । मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
माल्दिभ्समा फुटबल खेलाडीले यसरी मनाए दशैं (फोटोफिचर)
काठमाडौं । साफ च्याम्पियनसिपका लागि माल्दिभ्समा रहेको नेपाली फुटबल टिमका सदस्यहरूले माल्दिभ्समै दशैँकाे टीका लगाएका
काठमाडाैँ । बडादसैँको मुख्य दिन विजयादशमीका अवसरमा आज बिहानको साइतमा घर घरमा मान्यजनबाट टीका, जमरा